Aaladaha Casriga ah ee Guryaha - Talooyin ku saabsan Ragga Stylish | Ragga Stylish
Alicia tomero | | nololeedka, Tiknoolaji
Tiknoolajiyad casri ah ayaa timid guryaheena. Waa hab lagu noolaado jawi leh faa iidooyin la qabsiga wanaagsan ee mustaqbalka cusub. Waxaa jira aalado kala duwan oo casri ah oo guryo ah kuwaas oo gacan ka geysanaya aasaasida raaxada gurigeenna iyo la macaamilidda adduunka ka baxsan, sidaa darteed, waxay la imaanayaan iyagoo aad iyo aad u xiiso badan inay guryaheena joogaan.
Internetku wuxuu nolosha nooga fududeynayaa dhinac walba, wuxuu soo galay warbaahinta oo dhan iyo xitaa qalabka guryaha ee gurigeenna. Sidan oo aad loo xakameeyo, qaab raaxo leh oo robot ah Waxay naga dhigi doontaa inaan dareemo taxaddar la'aan xagga shaqooyinka kala duwan iyo kalsooni badan.
1 Qalabka guryaha casriga ah
1.1 Amazon Echo Dot, waa qalab casri ah
1.2 Qalabka casriga ah
1.3 Alaabta guriga
Waxaa jira aalado casri ah oo kala duwan oo kala duwan. Qaarkood waxay u dhaqmaan si shaqsi ah oo kaliya hal, midka ugu weyn, sida Google Home, Amazon's Echo ama Apple's Siri ayaa ah caawiyeyaasha ugu muhiimsan ee dhammaan alaabooyinka kale inay shaqeeyaan. Waxay awood u yeelan doonaan inay isku maareeyaan iyagoo dhex maraya is dhexgal si aaladaha oo dhami ay ula jaan qaadaan midka ugu weyn.
Waad ku mahadsan tahay dhammaan faa'iidooyinkaas waxaad awood u yeelan kartaa xakamaynta guri caqli badan oo aad ugu mahadsantahay internetka. Waxaad la qabsan doontaa dhamaan howlaheeda dhamaan qalabkan rakiban iyo kuwa caqliga badan ee aad ku qeybin doonto guriga oo dhan.
Amazon Echo Dot, waa qalab casri ah
Waa mid ka mid ah aaladaha casriga ah iyo kaaliyeyaasha guriga in waxay ku shaqeyn doonaan amarrada codka. Waxay kaa caawin doonaan inaad sameyso qaybo noloshaada ka mid ah kuwo la qaadan karo oo macquul ah. Qalabkan wuxuu ku daraa xasuus caqli badan oo uu maamulo Alexia, taas oo kiiskan u shaqeyn doonta kaaliye ahaan. Alexia waa aftahan in xakamayn doona shaqooyin kala duwan waxayna siin doonaan cod si loo caddeeyo su'aalaha qaarkood. Naqshadeedu waa mid aad u shaqeyneysa, way yar tahay waxayna leedahay qaab u hadla.
Waxaa loo qaabeeyey si dhowr astaamo loogu isticmaali karo qaab gaar ah. Qof kastaa wuu habeyn karaa shaqadiisa maalin walba shaqsi ahaan. Kaaliyahaaga caaqilka ah ayaa ka jawaabi kara su'aalaha, kuu sheegi kara wararka, ciyaari kara muusikada aad jeceshahay, wuxuu ku siin karaa saadaasha hawada, xitaa wuxuu ku xirmi karaa aalado kale oo casri ah oo iswaafajin kara si aad adigu ugu maamuli karto si dijitaal ah.
Ka mid ah howlaha kala duwan ee Alexa ay ku siiso, waxaad geli kartaa jikada oo aad wax ku karin kartaa. Waxay kaa saacidi doontaa saacad ahaan, inaad sameyso liistada wax soo iibsiga haddii ay dhacdo inaad u baahato wax cunto ah xitaa waad heli kartaa inay kaa caawiso inaad ku beddesho mid ka mid ah maaddooyinka jikada. Sidoo kale kaa caawin doona inaad hesho cuntada ugu habboon ee dhacdo, waxay raadin doontaa habka cuntada ee usbuuca ama qof ama bog gaar ah.
Kuu ogolaanayaa inaad ku xirmaan qalabka la jaan qaada Iyo xitaa haddii aysan ahayn, waxaad ka dhigi kartaa kuwo la qabsanaya iyada oo loo marayo IFTTT, mid ka mid ah amarrada kiciya ee loogu talagalay Alexa.
Qalabka casriga ah
Aaladda noocan ah waxay ku sii kordheysaa muhiimadda bulshada casriga ah. Weli waa isla qalabkii hore, laakiin iyada oo gaar ahaaneed loo maareeyo caqli ahaan, iyada oo loo marayo Wifi iyo Bluetooth.
Qaboojiyeyaasha casriga ah Waxay ka kooban yihiin xusuus gudaha ah oo kuu oggolaaneysa inaad ka iibsato qaboojiyaha laftiisa. Waad ku xakameyn kartaa adoo adeegsanaya PC, mobilada ama caawiye qaar.
Mashiinnada dharka lagu dhaqdo ee casriga ah waxay ka kooban yihiin nidaam kale oo la mid ah oo maareeya sida loo sameeyo wareegyadaada dhaqidda. Waxay ku ogeysiin doontaa marka dharkaaga oo dhami nadiif yahay oo qalalan yahay.
Mashiibiyeyaasha casriga ah Iyagu waa qalab kale oo kaa caawin doona dareenkaaga dareenka. Iyaga ayaa xakamayn doona heerka wasakhda iyo shaqadaba waxayna samayn doonaan xakameyntooda si ay ula qabsadaan barnaamijka gaarka ah si ay u fuliyaan nadiifintooda.
Foornooyinka casriga ah: Waxaad ku xakameyn kartaa dhammaan howlaha dubista qalabkaaga gacanta. Waad ka bixi kartaa gurigaaga ama waad shaqeyn kartaa oo waad xakamayn kartaa adeegyadooda adigoon joogin.
Microwave smart: Waa aalado aad loo qiimeeyo oo aad xitaa codkaaga ku maamuli karto shaqsi ahaan, adigoon ku shaqeyn badhamada.
Waa alaabooyin yaryar oo kaa caawin doona inaad noloshaada aad uga sii fiicnaato. Iyada oo alaabtan waxaad hagaajin kartaa tayadaada, raaxadaada iyo amnigaaga oo xitaa waxaad ku badbaadin kartaa biilka korontada.
Furayaasha smart Waxay kuu oggolaan doonaan inaad bixiso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xaddiga korantada qalabku cuno. Adoo adeegsanaya xakamaynta codka waxaad ku xakamayn kartaa qadarka laydhka ama hagaajin karaa goorta la dajinayo iyo deminta qalabkaas.
Nalalka casriga ah Iyaga ayaa gacanta lagu hayaa waxayna iftiimin karaan ilaa 16 milyan oo midab. Waxaa loogu talagalay inay awoodaan inay siiyaan iftiinka iftiinka aad rabto waqtiyada maalinta aad u baahan tahay. Xitaa iyaga ayaa iskudhafan kara filimada iyo muusikada si loo abuuro jawi diiran oo shaqsiyeed.
Heerkulbeegga casriga ah: Waxay la qabsan karaan nidaamyo badan oo kululaynta. Waxay ku siin doonaan waqtiga dhabta ah heerkulka qolka iyo qalab aad ku hawlgelin karto dhammaan dareemayaashaan si aad u kiciso kuleylka isla markaana u dhaqaajiso kuleylka lagama maarmaanka ah.
Kaamirooyinka amniga: aalado kale oo kaa caawin doona inaad xakamayso, meelkasta, sawirada waqtiga dhabta ah ee gurigaaga ama ganacsigaaga.
Qufulka Smart: sheeko cusub oo ku jirta qalab ka shaqeeya internetka. Waad ka dhaqaajin kartaa ama ka xiri kartaa qufulkaaga meel kasta oo aad joogto, xitaa waxaad abuuri kartaa lambarro lagu galo oo lagu maareeyo gelitaanka qoyska, saaxiibbada ama martida.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Qalabka guryaha casriga ah